यस्ता खाले भाँडावर्तनले निम्त्याउछ स्वास्थ्य समस्या - हिपमत
यस्ता खाले भाँडावर्तनले निम्त्याउछ स्वास्थ्य समस्या
स्वास्थ्यको लागि कस्तो खाना खाने भन्ने कुरा मात्र काफी छैन । कसरी पकाउने, कसरी खाने, कति खाने, कतिपटक खाने भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । त्यतीमात्र पनि कहाँ हो र ? कस्तो भाँडवर्तनमा पकाउने भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । अहिले सजिलोको लागि हामी खाना खान प्लाष्टिकको भाँ’डावर्तन प्रयोग गर्छौं । पकाउनका लागि ननस्टिक भाँडवर्तन प्रयोग गर्छौं । स्वास्थ्यका हिसाबले यस्ता भाँडावर्तन उपयुक्त मानिदैन ।
कस्तो भाँडावर्तनमा पकाएको राम्रो हो त ? एल्मुनियम यो एकदमै लोकप्रिय छ । किनभने यसको प्रयोग एकदमै सजिलो छ । हल्का हुन्छ । सफा गर्न पनि सहज हुन्छ । तर, केहि अध्ययनले बताएको छ कि, कतिपय अवस्थामा यो रोग पनि कारण बन्न सक्छ । यदि मस्तिष्कमा एल्मुनियमको स्तर अधिक छ भने, त्यसले अल्जाइमर, पार्किसन्स वा मस्तिष्कसम्बन्धी अन्या खतरा रहनसक्छ । यो कुरा त्यसमा पनि निर्भर गर्छ कि, खाना कति समयसम्म उक्त भाडामा पकाइयो वा भण्डारण गरियो । एल्मुनियमामा खाना पकाउनुअघि सावधानी अपनाउनुपर्छ । किनभने यो धेरै रिएक्टिभ मेटल हो ।
प्लाष्टिक जब खानेकुराको सवाल छ, प्लाष्टिकको सेवन सकेसम्म नगनु नै उत्तम हो । हार्ड प्लाष्टिकमा बीपीए हुन्छ, जो एक किसिमको टक्सिन हो । बैज्ञानिकका अनुसार बीपीएको सम्बन्ध क्यान्सर, प्रतिरक्षा प्रणालीमा गडबडी, अर्ली प्यूबर्टी, ओबेसिटी, डाइबिटीज, हाइपर एक्टिभिटीसँग हुन्छ । प्लाष्टिको भाँडा बर्तन प्रयोग गर्दा त्यसको माध्यामबाट बीपीए हाम्रो श’रीरमा पुग्छ । हालै बी’पीए फ्रि प्लाष्टिक त आएको छ ।
तर, यसमा पनि सिन्थे’टिक के’मिकल्स हुन्छ । माइक्रोवेभमा प्ला’ष्टिकको प्रयोग नगरौ । यहाँसम्म कि माइ’क्रोवेभ पनि सुरक्षित छैन । न’नस्टिक यो अहिले निकै लोकप्रिय छ । तर, यसको अधिक प्रयोग स्वा’स्थ्यका लागि राम्रो मानिदैन । नन’स्टिकमा उच्च ता’पक्रममा पकाउनु हुँदैन ।क’पर कम मात्रामा कपर स्व’स्थ्यकर मानिन्छ । तर, अधिक भएमा यो वि’षाक्त हुन्छ । के हुन्छ राम्रो ? सबैभन्दा राम्रो हो स्टे’नलेस स्टी’ल, सि’सा, फ’लाम वा सि’रामिक । यसको प्रयोग गरौं । फ’लाम र मा’टोको भाँ’डावर्तन सबैभत्दा हेल्दी मानिन्छ । फ’लाम अर्थात आइ’रन श’रीरका लागि एकदमै फाइदाजनक मानिन्छ । यसले रे’ड ब्ल’ड सेल्स निर्माणका लागि आवश्यक मानिन्छ ।
हुन त यसको अधिकतम सेवन पनि राम्रो मानिदैन । यद्यपी धेरैजसोमा आ’इरनको कमी नै हुन्छ । से’रामिक र ग्ला’स कु’कवेयर पनि सु’रक्षित मानिन्छ । यो सफा गर्न पनि सहज हुन्छ । यसमा ध्यान राख्नुपर्ने चाहि के छ भने ग्लेज्ड सेरा’मिक वा ग्ला’समा केहि सूक्ष्म तत्वको प्रयोग हुन्छ । जस्तो शि’सा, पि’ग्मेन्ट, क्यड’मियम, जो शरी’रको लागि हानि’कारक हुन्छ । खानासँगै यो शरी’रमा जाने सं’भावना हुन्छ ।अहिले सि’लिकन कु’कवेयर पनि निकै लोकप्रिय छ । खासमा यो सिन्थे’टिक रब हो, जसमा बान्डेड सि’लिकिन (प्राकृतिक तत्व, जो ढुं’गामा प्रचुर मात्रामा पाइन्छ) र अक्सि’जन हुन्छ ।
खानेकुरा राख्नका लागि खानेकुरा भ’ण्डारणको लागि काठको भाँडा एकदमै राम्रो अप्सन हो । ख’तरा कसरी कम गर्ने ? एल्मुनि’यमको ब’र्तनलाई लामो समयसम्म खाना स्टोर नगरौ । अनकोटेड क’परको बर्तनलाई कु’किङमा प्रयोग नगरौ । जुन ब’र्तन स्क्र्या’च हुन्छ, त्यो प्रयोग नगरौ । लामो समयसम्म एउटै भाँ’डावर्तन प्रयोग नगरौ । त्यो प्ला’ष्कि बाउल्स माइ’क्रोवेभ प्रयोग नगरौ, जसमा माइ’क्रोसेफको लेबल लगाइएको हुँदैन । सि’लिकन कुक’वेयरलाई पनि हाइ टे’म्प्रेचरमा प्रयोग नगरौ ।